के युद्धमा पनि जेट विमान हाई–वेमा उत्रिन सक्छन् ? - hamro Desh
के युद्धमा पनि जेट विमान हाई–वेमा उत्रिन सक्छन् ?
काठमाडौं । मंगलबार बिहान चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारी साधनहरु गुड्ने उत्तर प्रदेशको लखनऊ–आगरा राजमार्गमा भारतीय वायु सेनाका १६ विमान ‘टन एण्ड गो’ र ‘ल्याण्ड’ भए ।
विमानी भाषा अनुसार ‘टच एण्ड गो’ भनेको जमिनको एकदमै नजिक आउनु अथवा क्षण भरका लागि छुनु र फेरी उड्नु हो भने ‘ल्याडिङ’ भनेको जमिनमा अवतरण गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु हो ।
‘स्पेशल ड्रिल’ अनुसार ३५ हजार किलोग्रामको सी–१३० जे सुपर हरक्युलीज एयरक्राफ्ट राजमार्गमा अवतरण भयो भने ‘सुखोई ३०’ र ‘मिराज ३०’ ले राजमार्ग छोएर उडान भरे । ‘मिराज २०००’ लडाकु विमान र ‘सुखोई–३०’ उत्तर प्रदेशको उक्त राजमार्गमा दुई पटक अवतरण भएका छन् । सन् २०१५ मा ‘मिराज २०००’ पहिलो पटक राजमार्गमा अवतरण भएको थियो । गत वर्ष नोभेम्बरमा ‘सुखोई–३०’ ले सोही राजमार्गको ३.३ किलोमिटर लामो भागमा अवतरण भएको थियो ।
भारतका १२ राजमार्गलाई लडाकु विमान अवतरण हुन सक्ने राजमार्गका रुपमा छनौट गरिएको छ । ती राजमार्गलाई आपतकालिन अवस्थामा लडाकु विमान अवतरणका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताइएको छ । युरोप, अमेरीका, पाकिस्तान, ताईवान, अष्ट्रेलिया, जर्मनी लगायतका मुलुकहरुमा पनि लडाकु विमानहरु राजमार्गमा अवतरणका लागि प्रयोग गरिएका छन् । यसरी लडाकु विमान अवतरण गर्न सकिने राजमार्गहरुलाई अवतरण अनुकुल हुने गरी निर्माण गरिएका हुन्छन् ।
भारतका लागि राजमार्गमा लडाकु विमान अवतरणको उदेश्य के हो ? भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चलि रहन्छ । विगतमा कयौ पटक पाकिस्तानले भारतका हवाई स्थलहरुमा आक्रमण गरिसकेको छ । विमान स्थलमा आक्रमण भएपछि अवतरणका लागि राजमार्गको प्रयोग अहम् हुन सक्छ ।